တရုတ် Cast အလူမီနီယံအင်ဂျင်ဘလောက် FT1.5 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Zhengheng
Cast အလူမီနီယံအင်ဂျင် FT1.5 ပိတ်ဆို့ခြင်း။
အပလီကေးရှင်းမော်ဒယ်များ- Changan Focus၊ Mondeo နှင့် Etro မော်ဒယ်အသစ်များ
ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်- 100000 PCS/နှစ်
Cast အလူမီနီယံအင်ဂျင်ဘလောက်ဗလာ၊ ပစ္စည်း ZL101A
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း- လူမီနီယမ်အလွိုင်း ZL101A
ဆလင်ဒါအချင်း * လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) : 84×90
လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း -> Mold -> Die Casting -> Deburring -> Rough Inspection -> Processing -> Finished Product Packaging
Zhengheng Power မှထုတ်လုပ်သော ဆလင်ဒါသုံးလုံးပါ အလူမီနီယမ်အင်ဂျင်ဘလောက် FT1.5 ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏နာမည်ကြီးမော်တော်ကားအမှတ်တံဆိပ် Changan Automobile သို့ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု၊ Mondeo နှင့် Etro မော်ဒယ်အသစ်များအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ဆလင်ဒါဘလောက်ကို မြင့်မားသောဖိအားအသေခံခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။သွန်းအလူမီနီယမ်အင်ဂျင်ဘလောက်သည် ဆလင်ဒါဘလောက်၏အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး မော်တော်ကား၏ ပေါ့ပါးသော၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေးလမ်းကြောင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ သွန်းအလူမီနီယမ်အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလူမီနီယမ်ဆလင်ဒါတုံး ၁၀ သန်းကျော်၊ လက်ကားအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကို စုဆောင်းထားပြီး၊ အလူမီနီယံအင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးကို ပူးတွဲသုတေသနပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စောင့်မျှော်ပါ။
1. Zhengheng Power သည် အင်ဂျင်ဘလောက်သွန်းလုပ်ခြင်း၊ အလူမီနီယံအင်ဂျင်တုံးထုတ်လုပ်မှုကို အာရုံစိုက်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး ခိုင်မာသောဆလင်ဒါဒေတာဘေ့စ်ကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
4. အစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် သင့်အား ကူညီရန် အလူမီနီယမ်အင်ဂျင်ကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဝယ်ယူမှုပိတ်ဆို့ခြင်း။
3. မေး- အစိတ်အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံများကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်ပါသလား။
ယခင်- အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ CE12
နောက်တစ်ခု: 7H ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဆလင်ဒါခေါင်း
အလူမီနီယံ မော်တော်ကား အင်ဂျင် ဆလင်ဒါ အလွတ်...